Mamindra ny lisitry ny sivana avy any tanibe Shinoa mankany Hong Kong? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Marsa 2019 3:22 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Jolay 2012)
Nahita ny gazety iray eo an-toerana, AM730 [zh] fa manivana ireo tranonkala maromaro mety hanohina ara-politika ny tolotra wifi maimaim-poana an'ny governemantan'i Hong Kong. Na dia efa nisokatra indray aza ny ankamaroan'ireo tranonkala rehefa naharay ny fitarainan'ireo mpisera aterineto, miahiahy kosa ireo mpiserasera sy vondrona mpiaro ny zon'olombelona manoloana ny tsy fisian'ny fanarahamaso ny lisitry ny sivana.
Tatitra avy amin'ny AM730 momba ny fanivanana wifi maimaim-poana ataon'ny governemantan'i Hong Kong.
Charles Mok, bilaogera malaza sady manam-pahaizana momba ny aterineto, no anisan'ny voalohany nandinika ny olan'ny sivana. Araka ny tatitra, raha nanandrana niditra tao amin'ny sehatra media sosialy Shinoa, “FanFou” avy amin'ny tolotra wifi maimaim-poana an'ny governemanta ao amin'ny tranom-boky foibe izy tamin'ny herintaona, dia tsy tafiditra tao amin'ilay tranonkala. Nametraka fitarainana izy ka ny valinteny azony dia hoe nahatsikaritra ny rafitra fanivanana mandeha ho azy fa mampidi-doza ilay tranonkala ka nampidirina tao anatin'ny lisitra mainty. Rehefa avy nandray ny fitarainana izy ireo, dia nodinihan'izy ireo ny votoaty ka nesorina avy eo ny fandraràna.
Nataon'ireo mpanao gazetin'ny AM730 ny fanandramana farany, nanandrana niditra tamin'ny tranonkala miisa 8 avy amin'ny toerana wifi 3 samihafa izy ireo. Tsy azo nidirana tao amin'ireo toerana 3 misy wifi ny tranonkala iray miaro ny zon'olombelona “64tianwang [zh]”. Naverina noho ny fitarainan'ireo mpiserasera kosa ireo tranonkala 7 hafa, izay tsy tafiditra tamin'izany ireo mpiserasera sasany. Ireo tranonkala fito ireo dia: Epoch times [zh] (tranonkalam-baovao mpanohitra), Information Center for Human Rights & Democracy [zh], Tiananmen Mother [zh], Hong Kong Commentary [zh], Youku [zh] (seha-dahatsary ao amin'ny tanibe Shinoa), Boxun news [zh] (tranonkalam-baovaon'ny mpanohitra) ary ny FalunDafa [zh] (tranonkala ofisialin'ny Falungong).
Nanazava ny biraon'ny teknolojiam-baovaon'ny fanjakana fa ny fifanarahana amin'ny tolotra wifi dia mitaky amin'ireo mpifanaiky ny fifanarahana mba hanome fanivanana mba hanakanana ireo votoaty tsy mendrika, vetaveta sy tsy ara-dalàna (toy ireo tranonkala filokana tsy ara-dalàna), saingy mbola tsy nanome torolàlana manokana momba ny fanivanana ny votoaty ny governemanta.
Mihevitra i Charles Mok fa novidina tany Shina tanibe ny sivan'ny mpifanaiky “lisitra mainty” ary tsy nahavita nandinika ny lisitra ilay mpifanaiky. Nanipika izy fa tokony havoakan'ny ny governemanta ny “lisitra mainty” ary tazonina ny rafitra fanivanana mangaraharaha ho an'ny vahoaka ary hisoroka izay fanivanana tsy ilaina.
Tamin'ny fakàn-kevitra vao haingana momba ny fanitsiana ny “Fanaraha-maso ny lahatsoratra tsy mendrika sy vetaveta”, nanolo-kevitra ny governemanta ao Hong Kong fa hanohana ny sekoly fanabeazana fototra ao an-toerana mba hametraka sivana ho an'ny tambajotran'ny sekoliny. Ho setrin'izany soso-kevitra izany, mangataka amin'ny governemanta ireo fikambanana momba ny zon'olombelona sy ny fahalalam-pitenenana ao an-toerana mba hanamora ny sehatra malalaka ho an'ny vahoaka ary hanara-maso ny lisitry ny sivana ataon'ireo orinasa tsy miankina mba hisorohana ny sivana tafahoatra amin'ny alalan'ny famindrana ny lisitry ny sivana avy any Shina ho any Hong Kong.